SARY: Milefitra Eo Anoloan’ny Fangatahan’ireo Mpianatra Ny Fanjakan’i Makedonia, Menatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2014 5:14 GMT
Ny 30 Aprily 2014, nanambara tolotra 1.050.000 euro (1.46 tapitrisa dolara amerikana) ho an'ny fanarenana ny Goce Delchev, trano malaza ratsy fatorian'ny mpianatra ankehitriny any Skopje ny ministeran'i fampianarana sy ny Siansa ao amin'ny Repoblikan'ny Makedonia, araka ny tatitra [mk] nataon'i Faktor.
Taorian'ny fanehoankevitra voalohany mikasika ny famendrofendroana sy fanivanana nataon'ireo manampahefana, dia toa naminaviana ny risiky ny tsy hahazoany (ny fon’) ireo mpianatra 1200 mipetraka ao amin'ilay trano fatoriana (ary ireo fianakaviany) ho eo am-pelatànany ny antoko eo amin'ny fitondràna, nandritra ny alina nialoha ny fifidianana ho avy. Ho isan'ny hetsi-panentanana ho fanaraha-maso ny fahasimbana dia nanome toky izy ireo fa haverina hatsangana io trano fatoriana io, ary namoaka ampahibemaso izany fanomezan-toky izany tamin'ny alalan'ny media mpiakàma amin'ny fitondrana, miaraka amin'ireo dokam-barotra aloa vola ao amin'ny Facebook izay mitondra mankany aminà tafatafa niarahana tamin'ny Praiminisitra tompon-toerana, mitondra ny lohateny hoe “Marina ny an'ireo Mpianatra.”
Nahamarika ireo sasany mpampiasa ny media sosialy fa ireo teny nampiasain'ny Praiminisitra Nikola Gruevski tanatin'ilay tafatafa dia nisy fitoviany hafahafa tamin'ny oha-pitenenan'i Josip Broz Tito, mpitarika sosialista tao Yogoslavia, taorian'ny tsy nahavitan'ny firotsahana mifono herisetra nataon'ilay antsoina hoe “mpitandro filaminan'ny vahoaka” handrava ny ankamaroan'ireo hetsi-panoheran'ny mpianatra tao Belgrade, izay tao anatin'ny hetsika eran-tany ho an'ny demokrasia tamin'ny 1968. Ilay fehezanteny [sr], “Nilaza ny namana Tito fa marina ny an'ireo mpianatra”, dia oha-pitenena malaza nanerana ireo fanjakana tao Yogoslavia teo aloha, ary voarakitra tanatinà tantara iray malaza [sr] tanatin'ilay horonantsary klasika malaza eram-paritra tamin'ny taona 1986, The Elusive Summer of '68. Ao anatin'ilay horonantsary, taorian'ny fanehoana ireo ‘korontana’ tamin'ny 1968, alàn'ny raim-pianakaviana ny vata fahitalavitra mba hisorohana ny hiresahan'ireo ankizy mikasika ireo zavatra mety heverin'ny fitondrana ho mampisaraka. Taorian'ny fanambaran'i Tito, nalainy tamim-pireharehana avy any amin'ny terana fitehirizan'entana ny vata fahitalavitra ary navelany nampiasain'ny zanany indray. Mitondra porofo iray mivaingana momba ny fitomboan'ny lanjan'ny mpianatra ho vondrom-pifidianana manana ny lanjany ny hetsika hafa farany nataon'ny governemanta. Taloha indrindran'ny fihodinana faran'ny fifidianana filoham-pirenena 2014, ny Zoma 25 Aprily, namindra fanampiana ara-bola ho an'ireo vatsim-pianarana taraiky ho an'ny mpianatra ny governemantan'i Makedonia. Amin'ny ankapobeny dia manomboka volana maro aty aoriana ny fandrotsaham-bola isam-bolana ho an'ireo mpianatra izay manomboka ny taom-pianarany ny volana Oktobra, ary misy fiatoana, mazàna dia mihisatrisatra ireo fandoavam-bola hatramin'ny fararano manaraka. Amin'ity in-dray mitoraka ity, nahazo vatsim-pianarana tokony ho fito volana taraiky ka natao in-dray naloa ireo mpianatra, na dia nanambara aza ny governemanta talohaloha kely teo fa hanomboka ny volana Mey ny fandoavam-bola, aorian'ny fifidianana. Manodidina ny 50 ka hatramin'ny 65 euro ny vatsim-pianarana isam-bolana.